किन हानियो फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंलाई गालामा थप्पड ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
किन हानियो फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंलाई गालामा थप्पड ?
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार ०७:४९:००
जनता असन्तुष्ट हुँदा उनीहरुले आफ्ना नेतलाई थप्पड तथा जुत्ता पनि हान्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि केही समयय अगाडि माओवादी नेता पचण्डलाई एकजनाले जुत्ता हानेका थिए । त्यस्तै अहिले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोंको गालामा थप्पड हानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार दक्षिणी फ्रान्सको एक कार्यक्रममा पुगेका म्याक्रोंको गालामा एक जना पुरूषले थप्पड हानेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडिओमा म्याक्रोंले आममानिसहरूसँग हात मिलाइरहेका बेला एक जनाले थप्पड हानेका हुन् ।
यसरी हिंसात्मक भएर राष्ट्रपतिलाई थप्पड हान्नु राम्रो मानिएको छैन । सेतो सर्ट, टाई र मास्क लगाएका म्याक्रोंले एउटा बारको अर्कोपट्टी उनलाई कुरिरहेका मानिससँग हात मिलाइरहेका थिए । त्यही क्रममा हरियो टि-सर्ट, चश्मा र मास्क लगाएका पुरूषले उनको पाखुरा समात्दै गालामा थप्पड हाने । तत्कालै सुरक्षाकर्मीले म्याक्रोंलाई त्यहाँबाट निकालेका थिए । थप्पड हान्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ती पुरूषले म्याक्रोंलाई थप्पड हान्नुको कारण खुलेको छैन । घटनाको केहीबेरपछि राष्ट्रपति म्याक्रोंले आममानिसलाई भेट्ने कुरालाई निरन्तरता दिएका थिए । आफूलाई यस्ता कुराले केही फरक नपर्ने म्याक्रोंको भनाइ थियो ।
उनले कोही व्यक्तिले यस्तो हिंसात्मक कुरा गर्न सक्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक बहसमा कुनै स्थान दिनु नहुने बताए ।
म्याक्रोंमाथि थप्पड हानिएको घटनाको फ्रान्सका राजनीतिज्ञहरूले निन्दा गरेका छन् ।